WINDOWS 10 ကိုတစ်ဦး RESTORE POINT တစ်ခုဖန်တီးရန်ကဘယ်လို - WINDOWS ကို - 2019
Windows 10 ကို Restore point တစ်ခုဖန်တီးနည်း
ရှိရာသို့အလျင်အမြန်သို့မဟုတ်နောက်ပိုင်းတွင် operating system ကိုအမှားအယွင်းများထုတ်လုပ်ရန်စတင်သည်ရုံအချိန်မရှိဘူးကြောင်းနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုအတူရင်ဆိုင်တိုင်းကို PC အသုံးပြုသူ။ ဤရွေ့ကား, malware ကို၏ installation ၏အကျိုးဆက်အဖြစ်စနစ်နှင့်တူသော fit မ Third-party drivers တွေကိုဖြစ်ပွားနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့သောကိစ္စများတွင်, သင်က Restore point တစ်ခု အသုံးပြု. မဆိုပြဿနာများကိုဖြေရှင်းပေးနိုင်သည်။
windose 10 အတွက် restore point တစ်ခုဖန်တီး
ရဲ့အမှတ် (တီဘီ) နှင့်မည်သို့ဖန်တီးပြန်ပေးအဘယ်အရာကိုမြင်ကြကုန်အံ့။ ထို့ကြောင့်တီဗီ - ၎င်း၏ဖန်ဆင်းခြင်း၏ထိုအချိန်ကစနစ်ကဖိုင်တွေရဲ့ status ကိုစောင့်ရှောက်တော်မူသောအထင်အမြင်တစ်ဦးကြင်ကြင်နာနာ OS ကို။ အဲဒီတီဗီကိုဖန်ဆင်းသောအခါအသုံးပြုသူကို အသုံးပြု. ပြည်နယ်ဖို့ operating system ကိုပြန်လည်ရောက်ရှိသည့်အခါဖြစ်ပါသည်။ backup လုပ်ထားမတူဘဲ OS ကိုကအပြည့်အဝမိတ္တူမဟုတ်ပါဘူးကတည်းက 10 နာလန်ထူအမှတ်, user data ကိုမထိခိုက်ပါဘူး windose ရှိသောစနစ်ဖိုင်တွေကိုပြောင်းလဲဖို့ဘယ်လိုပေါ်သတင်းအချက်အလက်ပေးစွမ်းသည်။
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်း TV နဲ့ပယ်ဖျက်ရန် OS ကိုအတွက်အဆိုပါလုပ်ငန်းစဉ်သည်ဖြစ်ပါသည်:
System Restore ကိုပြင်ဆင်ခြင်း
မီနူးပေါ်မှာ Right-click "Start" နှင့်ကိုသွား "Control Panel ထဲက".
တစ်ဦးအမြင် mode ကို Select လုပ်ပါ "အကြီးစား Icons".
တစ်ဦးကို item ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ "ပြန်လည်ထူထောင်ရေး".
ထို့နောက်ကို select "System ကိုချိန်ညှိခြင်း Restore" (စီမံခန့်ခွဲသူအခွင့်အရေးများရှိသည်ဖို့လိုအပ်) ။
ကာကွယ်မှုစနစ် drive ကိုမဘို့ရာခန့်ကြောင်းစစ်ဆေးပါ။ ကပိတ်ထားလျှင်, ခလုတ်ကိုနှိပ် "စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပါ" နှင့်ရန် mode ကို switch ကိုမသတ်မှတ် "ကိုယ်ပိုင်ကာကွယ်ရေးစနစ် Enable".
Restore point တစ်ခု Create
tab ကိုပြန် "System ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေး" (ဒီ, ယခင်အပိုင်းရမှတ် 1-5 လုပ်ဖို့) ။
operating system ကိုပယ်ဖျက်ရန်
တစ်ဦးက Restore point တစ်ခုလိုအပ်ခဲ့လျှင်အဲဒါကိုအလျင်အမြန်ပြန်လာနိုင်မည်ဖို့အသုံးပြုနေသူများကဖန်တီးထားသည်။ ထို့အပြင်ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းများ၏အကောင်အထည်ဖော်မှု Windows 10 ကို run ဖို့ငြင်းဆန်လျှင်ပင်ဖြစ်နိုင်သည်။ ဘာ Restore point တစ်ခုမှ OS ကိုပယ်ဖျက်ရန်၏နည်းလမ်းများနှင့်အသင်မည်သို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ပေါ်တွင်သီးခြားဆောင်းပါးအတွက်တတ်နိုင်သမျှသူတို့ထဲကတစ်ဦးချင်းစီအကောင်အထည်ဖော်ဖို့ရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ဒီနေရာမှာကျနော်တို့ကသာအရိုးရှင်းဆုံး option ကိုတင်ပြလေ့လာပါ။
သွားပါ "Control Panel ထဲက"မှမြင်ကွင်းကို Switch "Small Icons" သို့မဟုတ် "အကြီးစား Icons"။ ကိုသွားပါ "ပြန်လည်ထူထောင်ရေး".
စာနယ်ဇင်းများ "စနစ်စတင်ခြင်း Restore" (သင်စီမံခန့်ခွဲသူအခွင့်အရေးများရှိသည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်) ။
ခလုတ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Next ကို".
အဆိုပါ OS ကိုတဖြည်းဖြည်းအလုပ်လုပ်ခဲ့သည့်အပေါ်ရက်စွဲအာရုံစိုက်, သင့်လျော်တဲ့အချက်ကိုရွေးချယ်ပြီးထပ်မံကလစ်နှိပ်ပါ "Next ကို".
ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ရွေးချယ်ရေးကိုအတည်ပြု "ပြီးပြီ" အဆိုပါပယ်ဖျက်ရန်ဖြစ်စဉ်ကိုပြီးစီးသည်အထိနှင့်စောင့်ပါ။
Read more: Restore point တစ်ခု 10 windose ပြန်လှိမ့်ဖို့ကိုဘယ်လို
လိုအပ်ခဲ့လျှင်ထို့ကြောင့် Restore point တစ်ခုဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်တစ်အချိန်မီထုံးစံ၌, သင်အမြဲ Windows ကိုပြန်ပြောင်းနိုင်ပါတယ်ဤဆောင်းပါး၏အတိုင်းအတာအတွက်စဉ်းစား 10. စစ်ဆင်ရေးကြောင့်ထိုကဲ့သို့ပြန်လည်ကဲ့သို့သောအစွန်းရောက်တင်းခြင်းမရှိဘဲအမှားများနှင့်ပျက်ကျအမျိုးမျိုးတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်ရမယ့်အချိန်တိုလေးအဘို့ခွင့်ပြုအဖြစ်အတော်လေးထိရောက်သောဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုတယ် operating system ကို။
ဗီဒီယို Watch: Window 10 ကန. u200bပတ မ Window Recovery လပ. u200bနည. u200bန Window Restore လပ. u200bနည. u200b. u200b (နိုဝင်ဘာလ 2019).